May 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
IMEI null ဖြေရှင်းနည်း. Phone Application နည်းလမ်းများ
Honor H30-U10 IMEI null Fix
Maung Pauk at 7:50:00 AM 0
Honor H30-U10 ကို Firmware မှားတင်ရင်း IMEI null ဖြစ်တက်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင် IMEI ပြန်ထည့်ရတာအခက်တွေ့ကြရပါတယ်။ ဖြစ်တာကတော့
Root ဖောက်လို့အဆင်မပြေတာပါ။ အဲဒါတွေအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို
ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တာလေးတွေကို အရင်ရယူလိုက်ပါ။
Honor.H30-U10.twrp.imei.null.fix.updatezip.rar 10.85 MB
Live_TWRP_Honor3C.zip, Size 7.70 MB...
Fix_IMEI_Honor3C.zip, Size 3.13 MB...
Download ရယူလို့ရရှိလာတဲ့ TWRP zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ။ အထဲထဲမှာ dload folder ပါပါတယ်။
အဲကောင်လေးနဲ့ IMEI Fix zip ကို SD Card ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ SD Card ထည့်ပြီး
Power Key + Volume Down + Volume up ကိုတွဲနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ dload ကိုအလုပ်လုပ်ပေးသွားပြီး
TWRP recovery ထဲရောက်သွားပါမယ်။ IMEI zip လေးကိုရွေးပြီး install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Reboot ချပေးလိုက်ပါ။ Power ပြန်တက်လာရင် IMEI ပြန်မြင်ရပါပြီ။
Credit >>> http://www.carbontesla.com/
Copy From : Mobile Firmware update
IMEI null ဖြေရှင်းနည်း. Phone Application
MTK DB FILES စုစည်းမှု
Maung Pauk at 7:35:00 AM 0
META 3G နဲ့ MTK ဖုန်းများ IMEI ပြန်ရေးတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ် MI Phone တွေကတော့ Firmware ထဲမှာ ပါပြီးသားပါ မပါတဲ့ဖုန်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit : သန်းတိုးအောင်
Download MTK DB FILES : 82.77 Mb
Computer Keyboard ပေါ်က Function Key တွေကို ဘယ်နေရာမှာသုံးသလဲ
Maung Pauk at 11:16:00 PM 0
Computer Keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ F1 ကနေ F12 ထိ Function Key တွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးချနိုင်မှန်း ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း သိမယ်မထင်ပါဘူး... Function Key တွေရဲ့အသုံးအပြုအများဆုံး ယေဘုယျ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို ကျွန်တော် သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
F1 = Program အားလုံးနီးပါးမှာ အကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. F1 Key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ လက်ရှိ Active ဖြစ်နေတဲ့ Program ရဲ့ အကူအညီ ( Help ) Screen ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်..
F2 = Select လုပ်ထားတဲ့ File သို့မဟုတ် Folder ကို Rename လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. နောက်တစ်ခုက Windows Loading လုပ်နေစဉ်မှာ F2 ကိုနှိပ်ရင် BIOS Setting ကိုရောက်ပါတယ်.. ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာအားလုံးမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်များများမှာတော့ Loading လုပ်နေစဉ်မှာ F2 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် BIOS Setting ကိုရောက်ပါတယ်..
F3 = လက်ရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ Program အတွက် Search Box ကိုဖေါ်ပြဖို့အတွက်သုံးပါတယ်...
F4 = Alter Key နဲ့ F4 Key ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရင် လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ Program သို့မဟုတ် Windows Explorer Box ကို ပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်..
F5 = Windows Desktop ကို Refresh လုပ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. အင်တာနက် Browser မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Page ကို Reload လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Microsoft Office Ward မှာတော့ Find and Replace Dialog Box ပေါ်လာပြီး Go To မှာ Active ဖြစ်နေပါမယ်...
F6 = အင်တာနက် Browser ကိုအဖွင့်ပြီးအသုံးပြုနေစဉ်မှာ F6 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Address Bar မှာ Active ဖြစ်သွားပါမယ်... Adobe Pagemaker မှာတော့ Bold Type ကိုပြောင်းဖို့သုံးပါတယ်...
F7 = Microsoft Office Word မှာတော့ Spelling and Grammar Check လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်..
F8 = Windows Loading လုပ်နေစဉ်မှာ F8 ကိုဖိထားရင် Safe Mode ကိုရောက်ပါတယ်.. ဖိမထားဘဲ တစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်ရင်တော့ Boot Menu ကိုရောက်ပါတယ်..
F9 = Microsoft Office Word မှာ Document ကို Refresh လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်.. Microsoft Office Outlook မှာတော့ Send and receive email ကိုရောက်သွားပါမယ်...
F10 = ဖွင့်ထားတဲ့ Program ရဲ့ Menu ကို Active လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်.. နောက်တစ်ခုက Shift Key နဲ့ F10 ကိုနှိပ်ရင် Mouse ရဲ့ Right Click နဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်..
F11 = Full Screen Mode ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်.. ဘယ် Program မဆို F11 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Full Screen မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
F12 = Microsoft Office Word မှာတော့ Save as Dialog Box ပေါ်စေပါတယ်.. File Name, File Type, File Location တွေကိုပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်...
အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် Function Key တွေကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Feature တွေဖြစ်ပါတယ်.. Program အလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်...
Maung Pauk at 1:27:00 AM 0
MI PINPASS UNLOCK
PIN PASS UNLOCK(ADB)
PIN PASS UNLOCK(FASTBOOT)
HUAWEI OEM UNLOCK. နဲ့ အခြား Feature များစွာ ပါဝင်ပါတယ်.. အသုံးတည့်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ဒီ Tool ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ခဏပိတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်..
Credit : John Esmail
Download Unlocker V2 : 17.8 Mb
9008 Firmware Tool
Maung Pauk at 10:55:00 PM 0
JulyTharlay ရဲ့ သက်ြန် လက်ဆောင်.. သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများအား ဦးထားလျှက်
အမည်မပေးတတ်တော့လို့ " 9008 Firmware Tool " လို့မည်ပေးထားပါတယ်
အောက်ကပေးထားတဲ့ Model List အတိုင်း မိမိတင်မယ့် model ကို check တစ်ချက်မှတ် ဖုန်းကို 9008 ဝင် Start နှိပ့်ပီး Tri color သို့တန်းရောက်ပါလိမ့်မယ် ကျန်တာ Tri color fix လုပ်ခြင်း အပေါ်က image flashing လုပ်ခြင်းများက သိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျမ္မာခြင်း ပြည့်စုံပါစေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ကမ္ဘာမြေကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ
Tool ရဲ့ Feedback လေးတော့မျှော်နေပါတယ် စမ်းတာ G730-U30 နဲ့ အမြန်စမ်းလိုက်ရတာမို့ အဆင်မပြေတာများပြန်ပီးပြောပြကျဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘာ xml မှမပါပါဘူး ရေးမယ့် model ကို list မှာ အမှတ်ပေး start နှိပ့်ရင် tri color ရောက်ပါမယ် ပီးရင် tri color fix ကနေ fastbootimage folder ကိုရွေးပေးပီး လုပ်ပေးရုံပါပဲ။
Credit by Myat Noe Oo &Tool နှင့်သက်ဆိုင်သူအားလုံး
Download 9008 Firmware Tool : 2.33 Mb
Maung Pauk at 12:18:00 AM 0
ခုနောက်ပိုင်း Online မှာ အသုံးများတဲ့ Currency တစ်မျိုးကတော့ Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်.. Bitcoin ဆိုတာ Online ငွေစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရားဝင် အသုံးပြုနေတဲ့ Current လည်းဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ ယူနစ်ကတော့ BTC ဖြစ်ပါတယ်.. 1 BTC ဟာ USD ဒေါ်လာများစွာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်.. Exchange Rate တွေမှာ 1BTC ကို USD ဘယ်လောက်ဈေးရှိတယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်.. Online Virtual Credit Card တွေကိုလည်း Bitcoin နဲ့ ငွေထည့်ထားပြီး ငွေပေးချေခြင်း၊ လက်ခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.. BTC Account တွေကတော့ Blockchain လို အကောင့်ဖွင့်နိုင်တဲ့နေရာ တော်တော်များများ ရှိပေမယ့် coinbase ကတော့ လွယ်ကူတယ်၊ တိကျတယ်၊ လုံခြုံတယ်. ဒါကြောင့် BTC လက်ခံ/ပေးချေဖို့ CoinBase Account ဖွင့်ဖို့ ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်..
Coinbase Account ဖွင့်နည်း ကို ပြောပြပါမယ်..
www.coinbase.com ကိုသွားပါ။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားလေးက Sign Up ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
First Name, Last Name, Email ရယ် Password ရယ် ဖြည့်ပြီး I agree to ကို အမှန်ခြစ်လေး နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Sign up ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Sign up လုပ်တုန်းက ဖြည့်ခဲ့တဲ့ အီးမေးကို ဖွင့်ပါ။ Coinbase က ပို့ထားတဲ့ အီးမေးတစ်စောင် ရောက်နေပါမယ်. အဲဒီ စာထဲမှာ Confirm လုပ်ဖို့ Link တစ်ခု ရှိပါတယ်.. အဲဒါကိုနှိပ်ပြီး Verify လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Coinbase account တစ်ခု ရရှိပါပြီ..
ကိုယ့် Coinbase Wallet Address ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
1. ကိုယ့် Coinbase Account ကို ဝင်ပါ..
2. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက BTC Wallet ကိုနှိပ်ပါ..
3. ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားမှာ Wallet address ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ..
4. QR Code အကွက်ရဲ့အောက်မှာ ကိုယ့် Wallet Address ကိုမြင်နိုင်ပါပြီ...
ငွေပေးခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းအတွက် Bitcoin Address ကိုအသုံးပြုရပါတယ်.. QR Code ကိုအသုံးပြုပြီးလည်း ငွေပေး/ငွေလက်ခံလုပ်နိုင်ပါတယ်...
Firmware Phone Application Qmobile
Qmobile Firmware Free Download ( 22 Files )
Qmobile A120 MT6572
Qmobile A8 MT6577
Qmobile A900i MT6582
Qmobile S1 MT6582
Qmobile A6 MT6577
Qmobile A20 MT6589
Qmobile i5 MT6582
Qmobile A8i MT6572
Qmobile X500 MT6582
Qmobile A300 MT6572
Qmobile A110 MTK6572
Qmobile i6i MT6580
Qmobile X6 MTK6571
Qmobile A600 MTK6589
Qmobile A500 MTK6589
Qmobile A9 MTK6577
Qtab Q400 MTK6582
Qtab Q850 MTK6582
Qmobile X900 MTK6592
Download Qmobile Firmware 22 Files :
Samsung Clone MTK Firmware
S7562 MTK 6572
တွေအတွက် Firmware Flash File တွေဖြစ်ပါတယ်...
Download Samsung Clone MTK Firmware
Computer software Management Tool NS
NS_IRW (Inventory,Retail & Wholesale Management Software)
Maung Pauk at 11:28:00 PM 0
မြန်မာ+အင်္ဂလိပ် (၂) မျိုးသုံး အဆင့်မြင့် ဈေးနှုန်းသက်သာ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းထိန်း ကွန်ပျူတာစနစ်
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာ System ကို ပြောင်းသုံးချင်ပါသော်လည်း အောက်ပါအခက်အခဲများစွာကြောင့် ငွေကုန်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ကြတာကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ် ...
(၁) လုပ်ငန်းကြီးလို့ ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲလ် မသုံးချင်လို့ စိတ်တိုင်းမကျလို့ Customized Software ကို ကုမ္ပဏီကြီးကြီးတွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး အပ်သော်ငြား ... စက်ပျက်ရင် ချက်ချင်းပြင်မရပဲ ပင့်ဆောင်ရတဲ့ ဒုက္ခ ...
(၂) 10 သိန်းအထက်ပေးဝယ်လိုက်ရတဲ့ Software တွေကို Setup File မရလိုက်ပဲ ငှားသုံးလိုက်ရသလို ဖြစ်နေတဲ့ သိသိသာသာ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ
(၃) ရှိပြီးသားစက်ပစ္စည်းများကို သုံးမရဟု ပြော၍ အသစ်ထပ်ဝယ်ခိုင်းခြင်းနှင့် ရောင်းချလိုက်သည့် ပစ္စည်းများကို ပေါက်ဈေးထက် ၃ ဆ အထိ ဈေးတင်ရောင်းချခံရမှုများ
(၄) မိမိမှာ ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်တတ်သော Customer ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးသော (သူတို့လူသာလာရောက်ပြင်ဆင်မည်ဟု ကွက်ကျန်ရိုက်ထားသော) Software Company များ ....
(၅) နယ် Customer တွေ စက်ပျက်ရင် ကွန်ပျူတာ (3) ရက်မှ (4) ရက်အထိ နားလိုက်ရပြီး ပြန်သုံးသည့်အခါ ပစ္စည်းလက်ကျန်များ ပြန်ကိုက်ရပြီး ပြင်လို့မဆုံး တဗြုန်းဗြုန်း ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခ ....
(၆) တခါခေါ်ပြင်ရင် လမ်းစားရိတ်တွေနဲ့ (၁) သိန်းလောက်ကုန်ကျနိုင်ပြီး ဘာဖြစ်ဖြစ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ Service ခေါ်ရမယ့် နောက်ကွယ်က ကွက်ကျန်ဇယားများနှင့် သိပ်မကုန်ချင်လျှင် အဓိကမြို့ကြီးတွေကို စက်အလုံးလိုက်ပို့ရတဲ့ ဒုက္ခများ ....
(၇) အလုံးလိုက်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျ ဟိုရောက်မှ မပျက်တဲ့စက် ပျက်တယ်ပြောလည်း Customer က မထူးဇာတ်ခင်း ပြင်လိုက်ရတဲ့ ကိစ္စ ....
(၈) သေသေချာချာ အိမ်ယူစမ်းသပ်ခွင့်မပေးပဲ ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ၀ယ်လိုက်ရပြီး ပြီးတော့မှ အဆင်မပြေလို့ ငွေကုန် စက်တွေ အဖတ်တင် မသုံးဖြစ်ပဲ ပစ်ထားလိုက်ရတော့တဲ့ Customer များ .... စသဖြင့် .. များစွာရှိပါသေးတယ် ...
တခါဝယ်ပြီးရင် နောင်တကြိမ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် Service ခေါ်လုပ်ဖို့လည်း လုံးဝမလို ...
စက်ပစ္စည်းဆိုတာ ပျက်တတ်တယ်ဆိုတော့ .....
ကွန်ပျူတာ ပျက်သွားရင် ကိုယ်ဘာကိုယ်အဆင်ပြေသလို နီးစပ်ရာမှာ
5000 လောက်ပေးရင် စိတ်ကြိုက် Windows တင်ခိုင်းလို့ရတယ် ...
ပြီးရင် ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ခလုတ်သုံးချက်နှိပ်ပြီး ပြန်ထည့်လို့ရမယ် ..
မ၀ယ်ခင်လည်း အကြိုက်စမ်းချင်သေးတယ် .... ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာရအုန်းမယ် ...
သုံးစွဲနည်းတွေအတွက် .. ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိသလို ....
Online ကနေလဲ စက်ထဲကို လူမလာပဲ .. ဆော့ဖ်ဝဲလ်ချည်း လှမ်းထည့်ပေးနိုင်တယ် ...
ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မျိုးကို အောက်ပါ လင့်ခ်တွေကနေ မ၀ယ်ခင်အကြိုက်စမ်း...
ဒေါင်းယူစမ်းသပ်နိုင်ကြပါပြီ ... ။
Mr.Zin Minn Laht
Developer@New Stars Myanmar
Ph : 09972884080, 09790183228, 0943065913
Home Page : www.newstarsmyanmar.com
Download NS_RKTV 2.0 : 14.267 Mb
Maung Pauk at 10:48:00 PM 0
အစိုးရ ရုံးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ရုံးစာကို စနစ်တကျ ရေးသား၊ ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်.. တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအစိုးရ ရုံးတွေမှာ ရုံးစာတွေကို စနစ်တကျနဲ့ ပုံစံတပြေးညီရေးသားနိုင်ဖို့၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေးအဆင့်တွေ သိရှိလိုက်နာတတ်စေဖို့၊ ရုံးစာတွေကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတတ်စေဖို့ ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲကို မဖြစ်မနေ သိရှိထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်.. အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ ရုံးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အစိုးရရုံးတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာမို့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်မှတ်လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Download ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ.pdf : 15.75 Mb
Xiaomi Smartphone တွေကို TWRP Recovery သွင်းပေးနိုင်မယ့် Xiaomi TWRP Flasher
Maung Pauk at 10:10:00 PM 0
Xiaomi Smartphone တွေကို Model အလိုက် မှန်ကန်စွာ TWRP Recovery သွင်းပေးနိုင်မယ့် Xiaomi TWRP Flasher ဖြစ်ပါတယ်...
Download Xiaomi TWRP Flasher : 2.65 Mb
NS_IRW (Inventory,Retail & Wholesale Management So...
Xiaomi Smartphone တွေကို TWRP Recovery သွင်းပေးနို...